Tsipika famokarana zezika mitambatra tsy misy maina - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Manana traikefa feno amin'ny tsipika famokarana granular extrusion tsy misy maina. Tsy ny rohy fizotry ny fizotran'ny famokarana ihany no ifantohantsika fa ny fahazoana ny antsipirian'ny fizotran'ny tsipika famokarana tsirairay avy hatrany ary hahatratra ny fifandraisan-davitra. Ny fizotry ny famokarana tanteraka dia iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fiaraha-miasao amin'ny YiZheng Heavy Machinary Co., Ltd Manome vahaolana namboarina manokana mifanaraka amin'ny tena ilain'ny mpanjifa.
Tsipika famokarana zezika tsy misy fanamainana tsy misy maina afaka mamokatra zezika mitambatra avo, antonony ary ambany ho an'ny voly isan-karazany. Ny tsipika famokarana dia tsy mila maina, miaraka amin'ny fampiasam-bola kely sy ny fanjifana angovo ambany.
Izahay dia manome andiam-pamokarana granular extrusion tsy misy maina izay tsy mila maina. Ny fitaovana famokarana dia misy indrindra ny mixer sy ny feeder disk, ny milina fantsom-panafody, ny milina sieve roller, ny conveyor fehikibo, ny milina fonosana mandeha ho azy ary ny fitaovana fanampiana hafa.
Ny granulator extrusion tsy misy maina dia misy akora mandeha ho azy, conveyor fehikibo, mixeur biaxial, feeders disc, milina granulation extrusion, sieves roller, trano fitahirizana vita, milina fonosana mandeha ho azy, sns
2. Mixer zezika roa
5. Fonosana Quantitative elektronika